ကိုယ်ဝန်ပျက်ကျထားရင် အတူနေလို့ရလား | သိလိုရာမေး
ဒေါက်တာဒိအားမေးရန် ကိုယ်ဝန်ပျက်ကျထားရင် အတူနေလို့ရလား
ကျွန်တော်တို့သိလိုရာမေးကို ဟိုတစ်ခေါက်က အမျိုးသားတစ်ယောက်က သူ့အမျိုးသမီး ကိုယ်ဝန်ပျက်ကျတာ ၁ လလောက်တော့ ရှိပြီ။ အဲ့တာ လင်မယားနှစ်ယောက် အတူနေလို့ရပြီလား? ဆိုပြီး လာမေးခဲ့ပါတယ်။
ဒီကြောင့်မို့လို့ ဒီတခေါက်မှာတော့ မျိုးဆက်ပွားကျန်းမာရေး ဗဟုသုတတစ်ခုအနေနဲ့ ကျွန်တော်တို့ သိလိုရာမေးကနေ ဒီအကြောင်းနဲ့ ပက်သက်ပြီးတော့ ဆွေးနွေးသွားပါ့မယ်။
အမျိုးသမီးတွေ ကိုယ်ဝန်ပျက်ကျပြီးတဲ့အချိန်မှာ ဆရာဝန်ကနေ အချိန်ကာလတစ်ခုလောက်အထိ အခြေအနေကြည့်ပြီးမှ လင်မယားနှစ်ယောက် တစ်ဖန်ပြန်ပြီး အတူနေဖို့ တိုက်တွန်းလေ့ရှိကြပါတယ်။ အများစုကတော့ အမျိုးသမီးတွေရဲ့ ကိုယ်ခန္ဓာပိုင်းဆိုင်ရာကနေ ကြည့်မယ်ဆိုရင် အကြမ်းဖျင်း ကိုယ်ဝန်ပျက်ကျပြီး သွေးဆင်းတာ ရပ်သွားတဲ့အချိန်မှာ လိင်ဆက်ဆံလို့ ရပြီလို့ ကောက်ချက်ချလို့ရပါတယ်။ အချိန်အတိုင်းအတာအနေနဲ့ ပြောရရင် ပျက်ကျပြီး ၂ ပတ်ကနေ ၁လအတွင်းလို့ ပြောလို့ရပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ကိုယ်ဝန်ပျက်ကျပြီး အတူနေမယ်ဆိုရင် အမျိုးသမီးတွေအတွက် ဒီလိုမျိုး ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ခန္ဓာကိုယ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အဆင်သင့်ဖြစ်ဖို့ထက် နောက်ထပ် အရေးကြီးဆုံးတစ်ချက်ရှိပါသေးတယ်။ အဲ့ဒါကတော့
ဟုတ်ပါတယ်။ ရှင်းရှင်းပြောရရင် ကိုယ်ဝန်ပျက်ကျတယ်ဆိုတာ အိမ်ထောင်တစ်ခုမှာ ချစ်ရသူနှစ်ဦးရဲ့ သွေးသားနဲ့ ဖြစ်တည်လာတဲ့ ရင်သွေးလောင်းလေး ဆုံးရှုံးလိုက်ရတယ်လို့ ပြောရင်လဲ မမှားပါဘူး။ ဒီလို ဆုံးရှုံးလိုက်ရပြီဆိုကတည်းက လင်ရော မယားပါ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ထိခိုက်ခံစားရမှာပါပဲ။ ဒါပေမယ့် အမျိုးသမီးတွေက ကိုယ်ဝန်ပျက်ကျတဲ့အခါမှာ ခန္ဓာကိုယ်ပိုင်းဆိုင်ရာရော စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရော နာကျင်မယ်… စိတ်ထိခိုက်မှုတွေ ကြုံရမယ်… ဝမ်းနည်းမယ် အစရှိသဖြင့် ခံစားရတာတွေက အမျိုးသားတွေထက် ပိုပါတယ်။
အမျိုးသမီးတွေက ကိုယ်ဝန်ပျက်ကျပြီး အချိန်မျိုးမှာ လိင်ကိစ္စနဲ့ ပက်သက်လာရင်လဲ စိတ်မပါတာတွေ၊ စိတ်ကြွမလာတာတွေ၊ စိတ်အခြေအနေ မမှန်တာမျိုးတွေ ရှိလာနိုင်ပါတယ်။ ဒီတော့ အမျိုးသားတွေအနေနဲ့လဲ ကိုယ့်အမျိုးသမီးက ဒီလိုလက္ခဏာမျိုးတွေ ဖြစ်နေရင်လဲ မငြိုညင်ဘဲ ကိုယ့်လက်တွဲဖော်ကို စိတ်ရှည်ရှည်နဲ့ ဖေးဖေးမမ နဲ့ အားပေးစကားပြောသင့်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အမျိုးသားတွေကလဲ ဒီလိုအချိန်မှာတော့ လက်တွဲဖော် အမျိုးသမီးရဲ့ ဆန္ဒကို ဂရုတစိုက် တလေးတစား ရှိဖို့လဲ လိုအပ်ပါတယ်။
အမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့လဲ ကိုယ်ဝန်ပျက်ကျပြီး အတူနေမယ်ဆိုရင် ကိုယ့်ရဲ့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ နှစ်ခုလုံး အဆင်သင့်ဖြစ်တဲ့အချိန်၊ ကိုယ့်ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်က လိင်ဆက်ဆံဖို့ကိစ္စအတွက် ပြည့်ပြည့်ဝဝကျန်းမာတဲ့အချိန် ဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်။ ကိုယ့်ဘက်က ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အဆင်သင့်မဖြစ်သေးရင်တော့ ကိုယ့်လက်တွဲဖော် အမျိုးသားကို အကျိုးသင့်အကြောင်းသင့် ရှင်းပြပြီး တိုင်ပင်သင့်ပါတယ်။
ကိုယ်ဝန်ပျက်ကျပြီး အချိန်တိုအတွင်း အတူနေမယ်ဆိုရင် အန္တရာယ်ရှိလား?
ကိုယ်ဝန်ပျက်ကျပြီး ထိုက်သင့်တဲ့ အချိန်ကာလတစ်ခုကို မစောင့်ဘဲ အတူနေဖို့စိတ်ကူးထားမယ်ဆိုရင်တော့ အနည်းအများ အန္တရာယ်တွေ ရှိနိုင်ပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ အမျိုးသမီးတွေ ကလေးမွေးရင်ပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ ကလေးပျက်ကျရင်ပဲ ဖြစ်ဖြစ် သားအိမ်ခေါင်းက ပွင့်တဲ့အခါမျိုးမှာ ပြင်ပထိုးသွင်းမှုကြောင့် ဒါမှမဟုတ် တခြားအကြောင်းအရင်းကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ် သားအိမ်ထဲကို ပိုးဝင်နိုင်ခြေများပါတယ်။
ရှင်းရှင်းပြောရရင် အဲ့လိုအချိန်မျိုးမှာ အမျိုးသမီးတွေ ရာသီလာရင် သုံးလေ့ရှိတဲ့ ဂွမ်းတောင့်ကိုတောင် မသုံးဖို့ တားမြစ်ထားတဲ့အတွက် လိင်ဆက်ဆံတာဆိုရင် ပိုလို့တောင် ဆိုးပါသေးတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ဆရာဝန်တွေက ကလေးမွေးပြီးတဲ့ အမျိုးသမီးကိုဆိုရင်လဲ အမျိုးသားနဲ့ အတူနေဖို့ အနည်းဆုံး ၄၅ ရက်၊ မတော်တဆ ကိုယ်ဝန်ပျက်ကျတဲ့ အမျိုးသမီးကိုဆိုရင်လဲ အနည်းဆုံး ၂ ပတ်ကနေ ၁ လ အထိ စောင့်ခိုင်းတာဖြစ်ပါတယ်။
အမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့ ကိုယ်ဝန်ပျက်ကျပြီး အချိန်တော်တော်ကြာတဲ့အထိ ကိုယ်ခန္ဓာပိုင်းဆိုင်ရာ ထိခိုက်မှုတွေ ဆက်တွေ့နေရရင်ပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ ကိုယ့်လက်တွဲဖော်နဲ့ အတူနေဖို့ စိတ်မပါတာ၊ အတူနေစဉ်မှာ ကိုယ်ခန္ဓာ အစိတ်အပိုင်းတွေ နာကျင်တာ စတဲ့ အချက်တေွ ဖြစ်လာရင်တော့ နီးစပ်ရာ ဆေးရုံ၊ ဆေးခန်းမှာ ဆရာဝန်နဲ့ သွားရောက်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးသင့်ပါတယ်။